Mashruuc Madaxweyne Biixi U Balan Qaaday Bulshadda Boorama Oo Fulintiisa La Bilaabay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Mashruuc Madaxweyne Biixi U Balan Qaaday Bulshadda Boorama Oo Fulintiisa La Bilaabay
Boorama (SDWO): Wakaaladda horumarinta jidadka Somaliland ayaa maanta si rasmiya u bilawday dhismaha Buundo laga dhisayo magaaladda Boorama oo isku xidhaysa jaamacadda Camuud iyo magaaladda inteedda kale.
Buundadaas oo uu dhagax dhigay madaxweyne Muuse Biixi mar uu dhawaan booqasho ku tegay Boorama, isla markaana uu balan qaaday in dhakhso ah loo bilaabi doono ayaa waxa saaka si rasmiya loo bilaabay dhismaheedda.
Waxaana goob joog ka ahaa bilawga mashruucaasi maareeyaha guud ee hay’adda wadooyinka Somaliland Cisman sheekh Cabdi, oo ay wehelinayeen maayarka Boorama iyo masuuliyiin kale.
Maareeyaha wakaaladda horumarinta jidadka Somaliland oo hadal ka jeediyay bilawga Buundadaasi ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in maanta ay bilaabeen dhismaha Biriijkaasi oo baahi weyn ay u qabeen bulshadda Boorama.
Halkan Ka Daawo Maareeyaha Wadooyinka oo Arrimahaas Ka Hadlaya: